ကြော်ငြာထဲမှာ Apple ကို ခလုတ်တိုက်ပြီး Galaxy S9 ကို ကြေငြာခဲ့တဲ့ Samsung – Myanmar Mobile App
Samsung က ကြော်ငြာကမ်ပိန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ Apple ကိုမထိခလုတ်လေးတွေ လုပ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ ပြောချင်တဲ့လိုရင်းကို မထိခဲ့တာ များနေတာပါ။ အခုဆိုရင်လည်း Galaxy S9 ကို ကျော်ကြားအောင်လုပ်တဲ့ဗွီဒီယိုလေးမှာလည်း ပေးချင်တဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကို မြင်အောင်မပြနိုင်ခဲ့ပြန်ပါဘူး။
Galaxy S9 ဟာ စမတ်ဖုန်းကောင်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်လို့ ပြောထားပေမယ့်လည်း iPhone နဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖို့အတွက် ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ . . .
ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အဆိုးတွေချည်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုးသွားတာက Samsung က သူ့ရဲ့ ပူပူနွေးနွေး flagship လေးကို လေးနှစ်လောက်ဟောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၄ခုနှစ်က iPhone6နဲ့ ယှဉ်ပြထားတာပါ။
ဗွီဒီယိုလေးကတော့ တစ်မိနစ်လောက်ပဲကြာတာဖြစ်ပြီးတော့ iPhone6အသုံးပြုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က လေယာဉ်နဲ့မိသားစုဝင်တွေဆီ ခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာ နှေးနေတာကို ပြသထားပါတယ်။ စစချင်းမှာ လေဆိပ်လုံခြုံရေးတွေက ပုံမှန်စစ်ဆေးနေကျအတိုင်းလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်း လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း မဖြစ်တာကို ပြသထားပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ၂၀၁၈ခုနှစ်ထုတ် Galaxy S9 ကို နောက်တစ်ယောက်ကသုံးနေပြီး ဘာအရေးမှမပေါ်ကြောင်း ပြသသွားချက်ကတော့ ခန့်မှန်းလို့ရနေတဲ့ အနေအထားလေးပါပဲ။
Samsung က “newer iPhone models are currently available” လို့ ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လေးနှစ်ကြာနေတဲ့ iPhone ကို အသုံးပြုပြီးတော့ 2018 flagship က ဘယ်လောက်မြန်သလဲဆိုတာ ပြသတာကတော့ သိပ်မမိုက်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ ၂၀၁၄ခုနှစ်က Galaxy S တစ်လုံးနဲ့ ယှဉ်ပြစေချင်တယ်။ အခုဆိုရင် update တောင်မပေးတော့ဘူးလေ။ ဟုတ်တယ်မလား။
ဒီနေရာမှာ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာတစ်ခုက Galaxy S9 က သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အနေအထားအရဆိုရင် စမတ်ဖုန်းကောင်းတစ်လုံးဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဈေးကွက်ထဲက အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးလို့ ကြော်ငြာချင်ဇောများနေတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကြော်ငြာကလွဲသွားပြီးတော့ အဆိုးဆုံးဖြစ်သွားတယ်။ Samsung အနေနဲ့ ရှက်ဖွယ်လိလိပါပဲ။
Samsung က ကွျောငွာကမျပိနျးတှလေုပျတဲ့အခါမှာ Apple ကိုမထိခလုတျလေးတှေ လုပျတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ကံမကောငျးစှာနဲ့ပဲ ပွောခငျြတဲ့လိုရငျးကို မထိခဲ့တာ မြားနတောပါ။ အခုဆိုရငျလညျး Galaxy S9 ကို ကြျောကွားအောငျလုပျတဲ့ဗှီဒီယိုလေးမှာလညျး ပေးခငျြတဲ့မကျဆခြေျ့ကို မွငျအောငျမပွနိုငျခဲ့ပွနျပါဘူး။
Galaxy S9 ဟာ စမတျဖုနျးကောငျးတဈလုံးဖွဈတယျလို့ ပွောထားပမေယျ့လညျး iPhone နဲ့နှိုငျးယှဉျဖို့အတှကျ ကွိုးစားလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ . . .
ခွုံကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ အဆိုးတှခေညျြးပဲ မဟုတျပါဘူး။ ဆိုးသှားတာက Samsung က သူ့ရဲ့ ပူပူနှေးနှေး flagship လေးကို လေးနှဈလောကျဟောငျးနပွေီဖွဈတဲ့ ၂၀၁၄ခုနှဈက iPhone6နဲ့ ယှဉျပွထားတာပါ။
ဗှီဒီယိုလေးကတော့ တဈမိနဈလောကျပဲကွာတာဖွဈပွီးတော့ iPhone6အသုံးပွုတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျက လယောဉျနဲ့မိသားစုဝငျတှဆေီ ခရီးသှားတဲ့အခြိနျမှာ နှေးနတောကို ပွသထားပါတယျ။ စစခငျြးမှာ လဆေိပျလုံခွုံရေးတှကေ ပုံမှနျစဈဆေးနကေအြတိုငျးလုပျဆောငျတဲ့အခါမှာလညျး လိုခငျြတဲ့ပုံစံအတိုငျး မဖွဈတာကို ပွသထားပါတယျ။
တဈခြိနျတညျးမှာပဲ ၂၀၁၈ခုနှဈထုတျ Galaxy S9 ကို နောကျတဈယောကျကသုံးနပွေီး ဘာအရေးမှမပျေါကွောငျး ပွသသှားခကျြကတော့ ခနျ့မှနျးလို့ရနတေဲ့ အနအေထားလေးပါပဲ။
Samsung က “newer iPhone models are currently available” လို့ ဖျောပွပေးခဲ့ပါတျ။ ဒါပမေယျ့လညျး လေးနှဈကွာနတေဲ့ iPhone ကို အသုံးပွုပွီးတော့ 2018 flagship က ဘယျလောကျမွနျသလဲဆိုတာ ပွသတာကတော့ သိပျမမိုကျပါဘူး။ ကြှနျတျောဆိုရငျတော့ ၂၀၁၄ခုနှဈက Galaxy S တဈလုံးနဲ့ ယှဉျပွစခေငျြတယျ။ အခုဆိုရငျ update တောငျမပေးတော့ဘူးလေ။ ဟုတျတယျမလား။
ဒီနရောမှာ စိတျပကျြစရာကောငျးတာတဈခုက Galaxy S9 က သူ့ရဲ့ကိုယျပိုငျအနအေထားအရဆိုရငျ စမတျဖုနျးကောငျးတဈလုံးဖွဈပမေယျ့လညျး ဈေးကှကျထဲက အကောငျးဆုံးစမတျဖုနျးတဈလုံးလို့ ကွျောငွာခငျြဇောမြားနတောပါ။ ဒါပမေယျ့လညျး ကွျောငွာကလှဲသှားပွီးတော့ အဆိုးဆုံးဖွဈသှားတယျ။ Samsung အနနေဲ့ ရှကျဖှယျလိလိပါပဲ။
အနောက်ကင်မရာ ၃ လုံးပါတဲ့ Y17 ကို Vivo မိတ်ဆက်
Posted on April 25, 2019 April 25, 2019 Author Ko Nyi
အနောက်ဘက်မှာ AI Triple Camera ၃ လုံး တပ်ဆင်ထားတဲ့ Vivo Y17 ကို အိန္ဒိယမှာ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ 13MP rear camera , 2MP secondary camera, 8MP ultra-wide angle lens များကို အနောက်ဘက်မှာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ 16MP front-facing camera ပါပါတယ်။ သူ့မှာ 6.35-inch (1544×720 pixels) HD+ FullView Display ထည့်သွင်းထားပြီး မျက်နှာပြင် အချိုးမှာ 19.3:9 ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင် အမျိုးအစားက IPS ဖြစ်ပါတယ်။ 2.3GHz Octa-Core MediaTek Helio P35 မောင်းနှင်ထားပါတယ်။ 4GB RAM, 128GB […]
Google က YouTube Music နဲ့ YouTube Premium တို့ကို ကြေညာ